आमा तिम्रो याद ... :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
आमा तिम्रो याद ...
अम्बु भाइ ,दक्षिण कोरिया
मन मरेँर अाउछ। जिँऊ गलेर अाउछ । हिड्दै गरेकाे बाटाे माेँडाै कि झै लाग्छ । साथ दिनेहरुकाे साथ नै छाेडीदिऊ कि झै लाग्छ। दिन रात झै लाग्छ रात किन यति अनकन्ठार भएकाे छ झै लाग्छ । दिनमा छटपटाउन नसक्दा रातमै छटपटान लाग्छ सपनाले पनि बैराँगि बनाउँछ । खै के भएकाे ? सायद मलम पनि उनै बुढि "हजुरअामा" सँगकै भलाकुसारि मै थियाे कि ?
शब्द उच्चारण गर्न पनि हिँचकिचाउँदैछु "अामा" । मृत्यु के हाे ? जन्म पछि मृत्यु प्रकृतिकाे नियम । तर पिँढा त "अामा" तुलसिँकाे माेठ अघि २ थाेपा पानी निल्न नसकेकाे मुढा जत्तिकै शाहस बटुल्नु पर्ने रहेछ।
जिन्दगिकाे हरक्षणमा शाहस दिने र मेरा हर गल्तिहरुलाई सजिलै अाफ्नाे थाप्लाेमा लिइदिने तिमी मेरि "अामा" । अाज तिम्राे अात्मालाई शाहस मान्दै, गल्तिहरु अाफ्नै टाउँकाेमा थुपार्न सिक्दैछु "अामा" । तिमी माथीबाट नियाल्दै हाेलिऊ है "अामा" ?
"अामा" तिमिले त थाहा पायाै हाेला है ? तिम्राे माइलाे नाति पनि तिमी सङ्गै हाेला है अहिले ? के गर्दैछाै , अामा-नाति माथी बसेर ? बर्ष दिन पनि नभई दुई जना ! हामीलाई कसरी बिर्सन्छाै नि ? कसरी मन कस्नु "अामा", कहिल्यै नफुस्कने गरि । घर त सुन्ने भयाे मनकाे त कुरै नगर "अामा" । साइबर स्पेश मै घुमाैँ झै भकाे छ ।
तिम्राे याद अायाे भने, तिमी सङ्ग कुरा गर्दा तिम्रा ती भासिएका स्वरहरु म सङ्ग अजै ताजै छन नि "अामा" । तिमी चाहिँ के गरेर बस्छेऊ नि ? तिमिलाई त माेबाइल चलाउन पनि त अाउदैन ।
भन्थेऊ नि कान्छाँ, बिहेँमा त अाँगनमा छम-छम रताैँली खेलाैँला । हर्कबडाँईका साथ बिहेँ गर्नुपर्छ है बाबू धेरै धन कमाएर अाइज । तिमिले त भुलेऊँ नि अब "अामा" । तर मैलेँ ....
रताैलीँ खेल्न पाएँनाै नि "अामा" । तिमी सुत्ने काेठा खाली छ रे । दलेँनीमा तिमी बस्ने कुर्सी पनि त्यसै छ रे। मेराेे शिर पहिले त्यै कुर्सी बाटै निहुरियाउछु तिमी कति पनी खुसी नहुनु है "अामा" नाति घर अायाे भनेर ।
"अामा तिम्राे देहावसानले म मात्रै हैन तिम्रा सन्ताननै सार्है निस्राई रहेकाछन । सजिलाे छैन "अामा" याे भुमरिबाट तिम्राे तिर्सना मेटाउन । अझ तिमिलाई त थाहै छ नि नाति धेरै टाढा भएकाे । बिदाईका हात हल्लाउने बेलामा । कान्छाँ मुग्लानँमा त धेरै दुःख हुन्छ । कसरी दुःख गर्लास ,सानै छस भन्थेऊ नि । तर थाहा छ "अामा" म त अहिले निकै ठुलाे भइसके नि, अझै पनि मुग्लानमै छु त "अामा" ।
"अामा" तिमिले गरेका प्राथानाहरु अझै म सम्झिरहन्छु जसले मलाई पच्छ्याइरहेका छन । तिम्रा तिनै प्राथानाहरुले मलाई म बन्नमा हरदम सहयाेग गरिरहेका छन।
तिम्रा तिनै थाेते बाेली र नातिलाई जहिल्यै ताते-ताते गरेर हिड्ने बालखा सम्झेर दिएका त्यी अघात मायाकाे जाेगीँ बनाएऊ "अामा" । तिमी त कठाेर हुनुपर्थ्याे । तिमिले त यसरी पिढा दिएर बाच्न सिकाउनु पर्थ्याे ताकि अाजकाे दिनमा सजिलै मन कसिदिन सक्थे "अामा" ।
तिमी त निठुँरि रैछाैँ । सार्है निठुँरि । अन्तिम एकपल भेट्ने बाचा-कसम पनि बिर्सेऊ है "आमा "
प्रकाशित मिति : २०७४ असार २४ (July 08, 2017)